lundi, 27 novembre 2017 19:01
Mahajanga: Miparitaka ny taolam-paty
Taolam-paty iray gony, milanja 60 kilao indray no nisy nanary teny amin'ny Fokontany Tsararano Nosikely.
Zaza sendra nilalao no nahita izany ny sabotsy teo tamin'ny 5ora hariva ka niantso ny manodidina, ary ireto farany no nampandre ny Zandary izay nidina teny an-toerana niaraka tamin'ny BMHS.
Taolan-dava sy taolam-pohy avokoa ireto narian'olona ireto. Matetika loatra no nahitana taolam-paty miparitaka teto Mahajanga tampon-tanàna hatramin'ny fiandohan'ny taona 2017.
Raha ho an'ny BMHS manokana, ity no tranga fanimpolony nandalo tamin'izy ireo amin'ny raharaha taolam-paty misy manary. Matetika olona vao mitady mpividy no mitondra azy ireny ka rehefa tsy mahita olona hanjifa dia izao hariana izao.
Evènement: Loko Race
Nifaly havanja ireo tanora tetsy amin’ny Stade annexe Mahamasina nanatanteraka ny LOKO RACE andiany faha telo.
Toy ny isan’taona dia mikarakara hetsika toy izao ny OKALOU izay mpikarakara mavitrika.
Kilalao izay niainga teny amin’ny Stade annexe Mahamasina ary nanodidina an’Anosy, izay fanatanjafan-tena miaraka amin'ny fifampitorahana amin’ny alalan’ny Loko artifisialy.
lundi, 27 novembre 2017 15:55
Asan-jiolahy: 9 lahy nitety tanàna nanafika teto Morondava
Tsy mandry fahalemana eto an-drenivohitry ny faritra Menabe. Halina izao dia kartie telo no notetezin’ny jiolahy niisa sivy eo, dia Avaradrova, Andabatoara ary Tsimahavao Be.
Lasibatra tamin’izany ny mpivarotra masikita, vehivavy handeha hiteraka any amin’ny hopitaly ary tokantrano iray.
Voasakana dia niverina tany an-tranony ireo mpitondra mpiteraka, nisy vaky loha niditra hopitaly, lasan’ireo jiolahy ny “radio carte” sy ny finday rehefa tsy nahita vola teo amin’ny mpivarotra maskita izy ireo, satria efa lasa nialoha ny mpivarotra nitazona vola.
lundi, 27 novembre 2017 15:18
Telma Coupe de Madagascar: Nandresy ny Fosa Junior
Niondrika tamin’ny alalan’ny moka foy 2 no 1 ny COSFA teo anatrehan’ny Fosa Junior avy any Boeny, izay lalao famaranana notontosaina tetsy amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina omaly alahady 26 novambra 2017.
Izy ity moa dia lalao ao anatin’ny Telma Coupe de Madagascar.
lundi, 27 novembre 2017 15:01
Kitra D2 - Seksiona Ambatondrazaka: Tompondaka ny AJA
Tontosa ny alahady 26 novambra ny lalao famaranana fiadiana ny amboaran’ny seksiona Ambatondrazaka diviziona faharoa, nifanandrinan’ny AJA sy FC Voromanga Atsangasanga.
Nisaraka ady sahala 1 noho 1 ny roa tonta taorian’ny fe-potoana ara-dalàna 90 minitra. Mbola ady sahala 2 noho 2 indray taorian’ny 120 minitra nifaranan’ny fanalavam-potoana.
Niroso tamin’ny “tirs au but” namantarana ny mpandresy.
Namono 4 ny AJA, baolina tokana no tafiditry ny FC Voromanga Atsangasanga ary dia Lasan’ny AJA ny amboara.
Raha tsy misy ny fiovana dia hiatrika ny lalao inter section ny ekipa AJA, FC Voromanga, FC Mami ary ny FC Andrarabaribe.
Matanga-Vangaindrano: Mitaraina noho ny haratsian’ny lalana ny mponina
Vita ny tetezana ao Etsiriky hiditra ny tananan'i Matanga aty amin'ny Distrikan'i Vangaindrano ka ny Faritra Atsimo Atsinanana no niantoka ny fanamboarana, izay mitetim-bidy 22.000.000 Ariary.
Niteraka fahasahiranana ho an'ny olona tao Matanga ny fahasimban'izy ity satria tsy maintsy natao “transbordement” ny entana ka lasa niakatra ny vidim-piainana tamin'ny fiandohan'ny taom-panangonana jorofo ity.
Fa mbola miteraka fahasahiranana ny mampiasa ny lalana Matanga - Vangaindrano ny faharatsian'ny ampahan-dalana manomboka amin'ny fivilian-dalana miala ny RN12A mirefy 10km, izay ratsy dia ratsy amin'izao vanim-potoan'ny orana izao.
Manao antso ny Ben'ny Tanànan'i Matanga mba hanamboarana io lalana io.
lundi, 27 novembre 2017 11:58
Fianarantsoa: Nampafantarina ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara
Nanokatra ny hetsika fankalazana ny faha-90 taona nisiany ny gazety an-tsoratra Lakroan’i Madagasikara ny sabotsy 25 novambra lasa teo.
Famelabelaran-kevitra sy fampafantarana momba ny harena an-kibon’ny tany misy eto amin’ny Nosy no nanamarihana izany ka i Randrianasolo Brice no nandahatra.
Io hetsika io no antsoina hoe, Académie Populaire ka ny Amis de Lakroa no mikarakara izany eo ambany fiahian’ny pretra zezoita Rakotoarison Hilarion.
Ireo toerana ahitana vatosoa sy harena ambany tany azo trandrahana no voaresaka nandritra io fotoana io. Nisy ihany koa fizarana ny vina fiaraha- miasa azo ifarimbonana mba ahafahan’ny malagasy migoka ny vokatra azo avy amin’ny fihariana manodidina ireo harena voalaza ireo. Narahana fanontaniana azahoam-baliny ny fotoana, nizotra tsy misy tomika izany rehetra izany.
lundi, 27 novembre 2017 11:55
Bekopaky-Antsalova: Deux touristes étrangers se font délester de leurs devises
Ils sont venus découvrir et apprécier le paysage dans le tsingy de Bemaraha, mais grande fut leur surprise au retour dans leur chambre d’hôtel car les devises (400 dollars, 1200 euros), ainsi que 400.000 Ariary et leur téléphone portable disparaissent sans qu’il y ait infraction.
Alertés, les Gendarmes sont venus faire le constat et ouvrir une enquête. D’après notre source, c’est le troisième cas de vol sans infraction dans cet hôtel, et ce sont des touristes étrangers qui en sont victimes.